Shiinaha dhoofinta 2020 miro cusub oo miro tufaax ah oo leh soosaarayaal qiimo leh iyo kuwa wax iibiya | AGR
1.Apple waa miraha macaan, ee la cuni karo ee geedka Malus domestica. Waa miro wareegsan oo ku imaan kara cabirro iyo midabbo kala duwan
sida jaalle, cagaar ama casaan. Tufaaxu badanaa waa macaan yihiin oo cam ayaa loo cuni karaa iyadoo cusub ama loo isticmaalay cuntooyinka, suugada, faafida, casiirka ama
tufaaxa caanka ah. Abuurka tufaaxa sidoo kale waa la jajabin karaa si loo soo saaro saliida, oo loo isticmaalo warshadaha qurxinta. Midhaha waxaa ku jira inta badan karbohaydraytyada, sonkorta iyo faybarka oo leh heerar dayacan oo borotiin iyo dufan ah
Tufaaxa tufaaxa 'Fuji' waxaa lagu gartaa cabirkooda weyn, casaan oo dhan, qaabka wareega, iyo cabirka celceliska sida baseball. 9-11% miisaanka miraha waa monosaccharides, hilibkiisuna waa mid is haysta, ka macaan kana jilicsan noocyo badan oo tufaax ah, sidaa darteed waxaa si ballaaran u jecel macaamiisha adduunka oo idil.
Marka la barbardhigo tufaaxa kale, tufaaxa Fuji waxay leeyihiin waqti aad u fiican ka hor taariikhda oo xitaa uma baahna in lagu keydiyo qaboojiyaha. Waxaa lagu keydin karaa waqti dheer heerkulka qolka. Haddii tufaaxa lagu qooyay 5% biyo cusbo ah 10 daqiiqo, la qalajiyey, lagu rido bac cusub oo haysa, la shaabadeeyo oo la geliyo qaboojiyaha, heerkulka waxaa lagu xakameynayaa 0-40 ℃, waana la keydin karaa in ka badan 5 bilood .
Midho macaan oo cufan, midhaha tufaaxa waa mid kamid ah miraha ugu caansan uguna caansan ee ka mid ah kuwa caafimaadka u feejigan, kuwa jecel jir dhiska ee si adag u aaminsan fikirka ah "caafimaadku waa maal." Midhahan cajiibka ah waxaa ka buuxa nafaqeeyayaal nafaqo leh oo, sida runta ah, aan looga maarmin caafimaadka ugu wanaagsan.
Midho macaan oo cufan, midhaha tufaaxa waa mid kamid ah miraha ugu caansan uguna caansan ee ka mid ah kuwa caafimaadka u feejigan, kuwa jecel jir dhiska ee si adag u aaminsan fikirka ah "caafimaadku waa maal." Midhahan cajiibka ah waxaa ka buuxa nafaqeeyayaal nafaqo leh oo, sida runta ah, aan looga maarmin caafimaadka ugu wanaagsan. Qaar ka mid ah antioxidant-ka ku jira tufaaxa waxay leeyihiin waxyaabo dhowr ah oo caafimaadka kor u qaada iyo ka hortag cudur, sidaa darteedna, iyagoo run ka dhiganaya murti maahmaahda ah, "Tufaax maalintii tufaax dhakhtarka wuu fogeeyaa."
Xiga: Shiinaha Qiimaha Jumlada Tayada Sare Qiimaha Casaanka cusub Apple
Shiinaha Tartan Jumlad Tayo Sare ...